Warbaahinta SBC oo maanta toban sano jirsatey 16.June 2001-2011 – SBC
Warbaahinta SBC oo maanta toban sano jirsatey 16.June 2001-2011
Hay’adda warbaahinta Soomaaliyeed ee SBC ayaa maanta u dabaaldegaysa munaabsada 10 sano guurada ka soo wareegtey aasaaskii & udub dhigeedii, iyadooo barnaamijyo ku saabsan munaasabadaasi ay maanta ka baxayan qalabka warbaahinta ee SBC.
Warbaahinta Caalamiga ah ee SBC (Somali Broadcasting Corporation) waxay ka kooban tahay qaybaha Telefishin, Raadiye & Internet.
SBC xarunteeda waa magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari, waxaana ay ku leedahay Studio-yaal magaalooyinka Garoowe & Qardho, magaalada London xafiis & Studio ayaa laga hirgaliyey dhawaan.
SBC waxaa la aasaasay 16 June 2001, waxay aheyd idaacadii ugu horeysay ee madaxbanaan oo laga furo deegaanada Puntland, waxay kaloo aheyd idaacadii ugu horeysay ee FM ah oo laga dhageyso Puntland.
SBC waxay kaloo noqotey sanadkaasi idaacadii ugu horeysay ee Af-Somali ku hadasha oo isku mar hal magaalo laga maqlo iyadoo la adeegsanayo codbaahiyaha FM-ka, waxaana laga dhageystey magaalooyinka Boosaaso, Qardho & Garoowe.
SBC waxay kaalin weyn ka qayb qaadatey mudadii ay jirtey horumarka qaybaha kala duwan ee bulshada, sida waxbarashada, ganacsiga, dhaqaalaha, nadaafada, caafimaadka & waliba amaanka, waxaana ay bulshada u baahisaa barnaamijyo kala duwan oo waxtar leh, kuwaasi oo kaalin weyn ka qaatey arimaha kor xusan oo ah tiirarka bulsho ay ku taagan tahay.
SBC mudadii ay jirtey waxay kaalin xoog leh ka qaadatey kor u qaadida ganacsiga & dhaqaalaha waxay dhiirigalisay in dalka dhismihiisa & maalgashigiisuba ay yihiin hawl sugaysa qof kasta oo muwaadin ah waxaana ay dhabaha taasi u xaartey in maalgashi badan ay muwaadiniintu ku sameystaan dalka taasi oo qayb ka weyn ka qaadatey kobaca dhaqaalaha & horumarka bulshada.
SBC waxay kaalin weyn ka qaadatey arimaha amaanka oo ah in dadka lagu wacyi galiyo amaanka & qiimaha nabada, dhiirigalinta wadaxaajoodka, xalinta khilaafaadka & u hiilinta nabadda & amaanka.
SBC waxay si gaar u siisay ahmiyad dadka aan codka laheyn iyadoo u suurtagalisay inay codkooda ku sheegtaan waxa ay taabanayaan & wixii ay doonayaan.
SBC waxay kaalin weyn ka qaadatey arimaha ururada bulshada, iyadoo door lixaad leh ka geysatey in bulshada rayidka ay ku yeeshaan saameyn dhinacyada maamulka & danaha ummada.
SBC waxay siisay ahmiyad aad u balaaran arimaha diinta waxaana barnaamijyada ka baxa qalabka warbaahinta SBC ay yihiin kuwa 55% la siiyey arimaha diinta sida muxaadarooyinka & daruusta diiniga, sidoo kale waxay SBC kaalin weyn ka geysatey baahinta nadwooyinka & muxaaradooyinka si bulshada looga wacyigaliyo wixii xun isla markaana loogu wacyigaliyo wanaaga & khayrka.
Wararka & Barnaamijyada
Warbaahinta SBC waxay xooga saartey u soo gudbinta bulshada Soomaaliyeed gudaha & dibada dhacdooyinka ka dhacaya guud ahaan caalamka gaar ahaan wadanka gudihiisa, iyadoo dhamaan gobolada & degmooyinka Soomaaliya ay ku sugan yihiin wakiilo wareed soo tabiya dhacdo kasta oo halkaasi ka dhacaysa si ay bulshadu u hesho wararka & warbixinada dalka gudihiisa & dibadiisa.
SBC waxay ku mutaysatey sumcad & magac aad u balaaran soo gudbinta warar sugan oo xaqiiq ku qotama kuwaasi oo saacad kasta laga soo waarido dal & dibad.
Maanta oo ay ku beegan tahay 10 sano guuradii ka soo wareegtey furitaankii warbaahinta SBC waxaan leenahay hambalyo dhamaan asxaabta sida joogtada ah ugu xiran warbaahinta SBC qaybaha Idaacada, Telefishinka & waliba Internet-ka.
SBC mustaqbalka dhaw insha ALAAH waxaa u qorsheysan balaarinta & baahinta adeega warbaahineed kaasi oo si weyn ugu farxi doonaan dhamaan asxaabta aadka ugu xiran, iyadoo haatan gacanta lagu hayo dhamaan arimahaasi sidii loo taabo galin lahaa Idinka ALLE.
Hadii aad doonaysid inaad ka qayb qaadato dabaaldegan e-mail inoogu soo dir sbcsomalia@gmail.com, hadii aad ku sugan tahay dalka dibadiisa ama gobolada ka baxsan Puntland soo wac +2525-4600 hadii aad ku sugan tahay ku sugan tahay gudaha Puntland soo wac +824012
Juun 16, 2011 at 4:59 pm
asc ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dhaman wan idin salaamay bahwanynta sbc,,,,,,,,,,,,kolle anigu waxan dhaho garan maayo kaliya ilaahay baan ugu mahad naqayaa noo keenay idaacadatan danta shacabka u adeegaysa hambalyo ayan idin leeyahay